Anaan Aaminayn Jaaliyadii Beeleed ee Jwxo-shiil, Intanaa ka soo Hadhay – Rasaasa News
Mar 18, 2010 Abtidoon, Ina Dhuubo, Jwxo-shiil, Qaaxo
Ishaa kuu macalin ah 8million ayey afar ka soo xaadirtay, indhahaan ii qabanayne dadkii xagee kala aaday? ma Kaalinkay u ordeen, ma aqal kalay ku shiraan, ma afgarad baa iman waayey oo ooday kal rogteen midan uun u ekee.
Waxaan hubaa oo aan hayaa in sanadkii 1990, ay ka tiro badnaayeen dadka ku hadlaya magac ummada Ogadeeniya kolka ay shirarka isugu yimaadaan intan aan maanta arkaayo. Hadaba maxaad u malaynaysaa akhristow in dadkani ay yihiin, waxaa weeye xaaska iyo caruurtii Macalin Diirane, Xaaska Abtidoon iyo caruurtiisii iyo Islaamo la daris ah labadooda, waxaa dheeri ku ah Shugri Cabdi Fagadhe oo ah wiilkii soo duubay dadka ku jira xeryaha qaxootiga isaga oo isleh xoolo ka samee.
Dadweynaha Somalida Ogadeeniya waa in ay ka dagaalamaan dadka magaca ku tumanaya, ee marka darisku kulmo ugu yeedha in ay kulantay Jaliyad Somalida Ogadeeniya, ummadani kabbo ma aha. Tuugu ma jecla in la ogaado waxa uu samaynayo, Dambiileyaasha Jwxo-shiila, Jaaliyad iyo shir midna u noqon mayso qol madow oo hoosta laga xidho, cabsi darteed.
Waxaan wada ognahay in Jaaliyadihii xoog lahaa ee isku duubnaa ay kala baxeen, kolkii la arkay in Jaaliyada iyo Jabhadaba ay ku jiraan dambiilayaal qaran, oo ay kow ka yihiin Jwxo-shiil, Abtidoon, Ina dhuubo, qaaxo iyo qaar kale oo meherad la,aan ah.
Sida aan xogta ku hayo, Tamuujo iyo Mustafe way ka tageen qolka kaniisada, ka dib kolkii ay waayeen wax ka badala qolka Kaniisada. Walina waxaa loo la,a yahay wax yidhaahda ha la ii duceeyo anaa Jwxo-shiil qolka Kaniisada u joogiye.
Qolka Kaniisada ayaa hada wixii ka dambeeya gacanta u galidoona hal reer, ama shakhsi isagu ku shaqaysta.
Waa yaabe kolkaas ayeyba Qorahey.com Jaaliyad baa kulantay odhan intay hal sawir soo dhajiso.